I-La casita de chelem - I-Airbnb
I-La casita de chelem
Chelem, Yucatán, i-Mexico
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lizbeth Margarita
Woza uzohlala endlini yethu encane enhle phambi kolwandle. Uma uhlelo lwakho luwukushaywa wumoya ezivakashini futhi uziphumulele phambi kolwandle, lena yindawo yakho. Ungahlala echibini lokubhukuda ngenkathi ubuka ukushona kwelanga futhi ujabulele isiphuzo sakho osithandayo.
Ilungele ukuhlala isikhathi eside, izinsuku zidlula futhi ukhohlwa ukubheka isikhathi ngenkathi uzijwayelanisa ne-hammock noma uphuza i-margaritas echibini. Indlu incane futhi ithule, ifanelekile uma ufuna ukuyeka ukuhlukunyezwa kwansuku zonke. Unekhishi elinazo zonke izinto eziyisisekelo zokupheka, sine-microwave, ifriji, i-corkscrew, umshini wokwenza ikhofi nezinye izinto eziyisisekelo njengamafutha, ushukela nosawoti. Asinayo i-air conditioning njengoba sinomuzwa wokuthi njengoba useduze kakhulu nolwandle asikho isidingo sokuba nayo. Sibe nezivakashi ezivela e-Los Angeles, e-Latvia, e-Toronto, e-New Zcountry, ukuze nje sikhulume ezimbalwa futhi akekho noyedwa oke wakhalaza ngisho nokushisa ebusuku noma ukungakwazi ukulala ngenxa yokushisa. Wonke amafasitela endlini asuka phansi afike kusilingi futhi ungawavula noma nini ukuze kungene umoya.
4.94 · 105 okushiwo abanye
Idolobha likude ngamakhilomitha angu-2.5, cishe uhambo lwemizuzu engu-30 kodwa libheke ukushisa kwelanga, situsa ukucela i-Uber ukuthi ikuhambise lapho kukhona namatekisi ashisayo (uhlobo olufana ne-uktuk) lawo avame kakhulu futhi ashibhile ukuya edolobheni futhi abuyele emuva. Ungathenga ukudla emakethe yedolobhana noma e-Dunosusa, e-Super Willys noma e-Oxxo, konke kusendaweni eyinhloko noma akudluli endaweni ekude nayo. Idolobha livame ukuthula futhi ungase uthole ama-Canada amaningi athathe umhlalaphansi noma amaMelika achitha isikhathi sabo sokuphumula edolobheni. Uma ufika ngesikhathi sasehlobo uzothola umkhosi omncane endaweni eyinhloko, ngokuvamile igcwele abantu abavela e-Mérida abeza ezindlini zabo zasolwandle.
Kukhona idolobha elikhulu eliseduze, i-Inceso, uma uthatha i- uma uya lapho ungahamba ngodonga lolwandle bese ukhetha izindawo zokudlela zokudla zasendaweni nama-bar.
E-Chelem sinezindawo ezimbalwa esizithandayo sincoma ukuthi ungazithola kumamephu e-google: -Café France yokudla kwasekuseni, ivula umshado
-Isitolo Sokudlela i-Costa Azul (zama inhlanzi ethosiwe noma i-ceviche)
-Puerto Lindo club de Playa (zama i-octopus tacos noma ifayela lezinhlanzi)
-U-Alpha Kite, uma ufuna ukuzama ukugwedla emanzini ume ngezinyawo noma izifundo zokutshuza ngekhayithi lena yindawo ongaya kuyo.
-U-Chelem Pier, ungaya lapho bese ugibela isikebhe esincane ukuze uhlole i-mangrove futhi uma unenhlanhla ungase ubone ama-flamingoes noma ama-crane.
-Ecological Reserve El Corchito. Ungase udinge i-invoice yalokhu kusukela e-Florence kodwa futhi nesikebhe esincane esikuyisa endaweni egciniwe kukhona indawo enamanzi amasha phakathi nolwandle kanye ne-mangrove. Uzobona izinhlobo zendawo ezifana nama-raccoon namajazi.
Ibungazwe ngu-Lizbeth Margarita
Singabamukeli abathathu abasingatha indawo: umama wami u-Daniel no-Daniel Sonke siyatholakala ukuphendula imibuzo nezingcingo nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuvamile umama wami angakunika izikhiye zendlu futhi ngiza ukuyothatha izikhiye ekupheleni kokuhlala.
Singabamukeli abathathu abasingatha indawo: umama wami u-Daniel no-Daniel Sonke siyatholakala ukuphendula imibuzo nezingcingo nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuvamile umama wami anga…